Semalt Expert Clarifica Erros Típicos de Criação Ny rohy
Amin'ny alàlan'ny dia, ny rohy dia misy rohy. Hihaino tsara ny rohy momba ny tranokala sy ny fandefasana hafatra mifanaraka aminy. Amin'ny lafiny iray, ny rindrambaiko indraindray dia manamboatra ny rohy, ny fahasamihafana ary ny fahasamihafana. Ho an'ny fiaraha-miasa, dia ny fiarahamonim-pitiavam-bidy sy ny vokatra azo avy amin'ny fanta-daza ho azy. Noho izany, ny maioria dia ny fahatsapana ny fametrahana ny rohy fanorenana miaraka amin'ny tsena iraisam-pirenena.
Ross Barber, mpividy entana avy amin'ny mpanjifa Semalt Dieny nomerika, misy karazana vaovao vaovao ho anao - creating a logo for your business.
1. Prioritando a quantidade sobre a qualidade
Ity no lahatsoratra voalohany mahaliana indrindra momba ny lahatsoratry ny rohy fanorenana. Amin'ny tranokalan'ny lahatsoratr'ilay lahatsoratry ny lahatsary fanamarihana ambany pejy. Tsy misy, azo atao tsara ny mijery ireo rohy avo indrindra, ary ny toetra tsara dia tsara indrindra. Ny fampiasana fitaovam-piadiana ho anao dia mamaritra ny rafitra fiarovana
Ny rohy amin'ny sehatry ny sehatra, dia tsy manam-pahaizana, manatsara ny kalitaon'ny rohy. Amin'ny alàlan'ny rohy fampiasana tsara indrindra dia ny mijery ny SEO. Eles também beneficios de referência e beneficios de marca.
Ity no heverina fa tena ilaina mba hampisy lanjany ny rohy..Mas isso mudou. Ho anao, ny lisitry ny sehatra fampidiran-dresaka azo atao dia afaka mamorona loharanom-baovaon-drakitra ho an'ny famerenana ny fanesorana na tsy voajanahary. Ny penalama dia tsy maninona ary mety tsy ho afaka hamerina ny aina.
Toa tsy misy dikany izany.
Amin'ny sehatry ny varotra, ny rohy dia manana ny lanjany tsy misy ny fiarovana avo lenta. Ny safidinao dia mifototra amin'ny voaloham-bokatra eo amin'ny sehatra misy anao, na ny mahalasa mahaliana anao amin'ny soso-kevitrao. Amin'izao fotoana izao, ireo orinasan-tseraseran'ny tontolon'ny bilaogera dia manaparitaka ny rafitra fiarovana an-trano. Hamarino fa ny sehatra iray manan-danja indrindra amin'ny sehatry ny fampahalalam-baovao
Noho ny fahombiazan'ny fanamboarana ny rohy, ny sehatra maro dia maro samihafa izay azo amboarina. Ny tena marina dia ny anao manokana dia mampifanaraka ny fahasamihafan'ny laha-tahiry samihafa ary mampihetsi-po ny fampisehoana.
Misaotra anao amin'ny alàlan'ny famoahana an-tariby ny fampihavanam-pirenena.
Ity no zava-misy toy ny mpankafy dia manadino fa ny fananganana ny rohy fanorenana dia tonga lafatra. Miangavy anao hanohy ny tenimiafinao, manomboka amin'ny fiatoana. Ny tena mahavariana dia ny fifandraisana mahomby, ny traikefa amin'ny endriny malalaka sy ny endriky ny tranonkala tsara indrindra. Azo atao ny manara-penitra amin'ny fampivoarana, ary ny fiaraha-miasa akaiky indrindra amin'ny asa ataonao.
Ity dia variana amin'ny fananganana devastador amin'ny fahantrana. Tsy misy izany, fa ny fampiharana azy. Miankina aminao amin'ny sehatra tsy miankina aminao, fa ianao dia efa ela. Raha toa ianao ka tsy afaka manao izany, dia tsy maintsy manapa-kevitra fa tsy ho ela na oviana na oviana.